कम्युनिस्ट हुँ भन्दा जनताले ढुंगामुढा गर्ने स्थिति आयो: नेता न्यौपाने - Karnalipatra
कम्युनिस्ट हुँ भन्दा जनताले ढुंगामुढा गर्ने स्थिति आयो: नेता न्यौपाने
कर्णालीपत्र संवाददाता १९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:४६
काठमाडौँ – नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले नेतृत्वको कारण आम नागरिकमा पार्टीप्रतिको धारणा नकारात्मक बनेको बताएका छन्।
शुक्रबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको गुट भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता न्यौपानले अध्यक्ष ओलीतर्फ संकेत गर्दै पार्टीको छवि धुमिल भएको दाबी गरेका हुन्।
उनले जनाको माझ कम्युनिष्ट हुँ भनेर जाँदा ढुंगामुढा खानुपर्ने स्थिति आएको उल्लेख गरे। भेलामा उनले भने, ‘आज डर छ, कम्युनिस्ट हु भन्दा जनताले ढुंगामुडा गर्ने स्थिति छ। यो गल्ती सच्याउन पर्छ।’
दाहाल नेपाल पक्षेका गुट भेलामा न्यौपानले शीर्ष नेतृत्वको अन्ध भक्त वा अन्धो विरोधले पार्टीलाई नै हानि पुर्‍याउने विश्लेषण गरे।
‘अन्धभक्त भएर विरोध र समर्थन नगरौं। नेता विशेषलाई देउरालीको ढुंगो मान्न हुन्न। आत्म स्वीकार गर्ने कम्युनिस्टको आचरण होइन, उनले अगाडि भने, ‘रणनीतिक उद्देश्य समाजवाद हो। यो तरिकाले अघि बढ्न सकिदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ।’
न्यौपानेले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र पार्टी दस्तावेज समाजवाद उन्मुख नभएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘पार्टीका दस्तावेज हेर्नुहोस्। पार्टी, वर्ग र किसान कति छ हिसाब किताब गर्नु त? सामन्तवाद कि समाजवाद कतातिर गएका छौँ?’
विद्यार्थीको भेलामा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको उल्लेख गरिन्। उनले अध्यक्ष ओलीले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव ठीक नभएको जिकिर गरिन्।
वैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षमा पहिलो पटक मूला उमारे (भिडियोसहित)
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:४६
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मूला उमारेका छन । अन्तरिक्षमा उमारिएको मुलालाई सन २०२१ मा पृथ्वीमा ल्याइनेछ । नासाकी अन्तरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इन्जीनियर केट रुबिन्सले पहिलो पटक इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनमा उमारिएको मूला संकलन गरेकी छिन । केटले २० वटा मूलालाई सन २०२१ मा पृथ्वीमा ल्याउनका लागि भन्दै प्याक […]
११ श्रावण २०७८, सोमबार १५:४५
हप्तामा दुई दिन बिदा प्रस्ताव !
८ पुष २०७७, बुधबार १५:४९
प्रचण्ड–माधव समूह : संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड
८ भाद्र २०७७, सोमबार ०७:०८
ट्रम्पकी दिदीले आफ्ना भाइलाई भनिन्–सिद्धान्त बिहीन झुटो व्यक्ति
रामेछापमा गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ
१० भाद्र २०७७, बुधबार ०९:५९
कोरोना संक्रमणका कारण बाँकेमा ३७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु